दुईवटा मतपत्र छाप्दा के–के समस्या हुन्छ? « Naya Page
दुईवटा मतपत्र छाप्दा के–के समस्या हुन्छ?
काठमाडाैं : छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम पुनः तयार गर्नुपर्नेछ । ती काम अब सुरुबाटै गर्नुपर्नेछ । यस्तै, मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ, तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने सातदेखि आठ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २२ हजारसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।